Google weputara ihe omuma banyere ...zụ ... ọ dịkwa egwu! | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 29, 2015 Douglas Karr
Otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ anyị na-arụkọ ọrụ nwere nsogbu nke na-adịkarịkarị n'ọtụtụ azụmaahịa mba. Dị ka ndị na-ere ahịa, anyị na-elekwasị anya na azụmahịa anyị dị ka a ga - asị na enweghị ókèala ala ma ọ bụ mgbanwe karịa oge - mana eziokwu ahụ bụ na ha abụọ nwere nnukwu mmetụta. Ọ bụrụ na ị nwere ike ide ọdịnaya dị na isiokwu ndị na-eji oge eme ihe, usoro niile, na ọdịdị ala, ọdịnaya nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma.
Google ka ulo oru Nghọta ppingzụ ahịa ebe ị nwere ike nyochaa olu ọchụchọ na oge na site na njupụta ala. Dị ka ihe atụ, nke a bụ ihe atụ nke ịzụ ahịa ọchụchọ maka mbadamba gafee US:
I nwekwara ike inyocha granular site na nyocha gị, na mpaghara ala, rue oke nwere oke. Nke a nwere ike inye aka na mmefu mgbasa ozi gị na ịhazi mgbasa ozi gị.
Ma n'ezie, ha na-enyekwa ọchụchọ ndị dị elu kwa ọnwa na afọ ị nwere ike ịchọgharị na ya.
Tags: ecommercenghọta googleihe omuma banyere googleịzụ ahịa nghọta